K Motlanthe: State of the Nation Address (isiZulu)
INkulumo Echaza Isimo Sezwe kaMongameli waseNingizimu Afrika, uKgalema Motlanthe, Umhlangano wePhalamende Iphelele, eKapa 6 uNhlolanja 2009
Mama Somlomo WesiGungu Sikazwelonke;
Mnu. Sihlalo Womkhandlu Wezifundazwe Kazwelonke;
Sekela LikaSomlomo kanye neSekela LikaSihlalo Womkhandlu Wezifundazwe Kazwelonke;
IJaji Eliyinhloko uLanga; Iphini LikaMongameli weRiphabhliki yaseNingizimu Afrika langaphambilini kanye noMongameli we-ANC; ONdunankulu Bezifundazwe;
Amalungu eKhabhinethi kanye noSomlomo Bezishayamthetho Bezifundazwe;
Izikhulu Ezaziphethe KwezoBulungiswa Ngaphambilini kanye neziPhathiswa ezeNgameleko zasePhalamende zangagaphambilini;
Amakhosi, AmaNxusa kanye noKhomishina Abaphezulu kanye nabahlonishwa abavela kwamanye amazwe abavakashile;
Abaholi Abahloniphekile beZinhlangano Zezombusazwe kanye namaLungu ePhalamende, abaholi beNdabuko;
Meya yeDolobha laseKapa;
Abaholi bezenkolo kanye nabameleli bomphakathi kuzwelonke;
Nginenhlanhla yokukhuluma ePhalamende laseNingizimu Afrika Elihleli Ngokuhlangana, ekuqaleni kwale seshini yokugcina yePhalamende lethu Lesithathu Elibusa Ngokwentando Yeningi.
Ngime ngaphambi kwabantu baseNingizimu Afrika ngokuzithoba ngethuba engibe nalo lokuba sehhovisi elikhulu kunawo wonke ezweni ngenxa yesimo esingejwayelekile esivele esinqumeni senhlangano eholayo kuhulumeni sokususa uMongameli obengaphambili esikhundleni.
Mina owami umsebenzi, wezinyanga ezimbalwa, wukuhola Izikhulu Eziphethe Kuzwelonke ekufezeni igunya elanikezwa i-African National Congress okhethweni luka-2004, nokwenza isendlalelo sokuphatha ngemuva kokhetho oluzoba khona.
Ukuthi sakwazi ukuqinisekisa uguquko olungenaphutha ezinyangeni ezinhlanu ezedlule kanye nokuqhubeka nezinhlelo zikahulumeni, sibonga ukuvuthwa kohlelo lomthethosisekelo, ingxenye yalo ebonakala ekubambisaneni kwamalungu eZikhulu Eziphethe ezintsha nezindala kanye noxhaso oluqinile lwabaphathi bezingxenye zikahulumeni wethu.
Uma ngibheka emuva eminyakeni eyishumi nanhlanu eyedlule, ngifisa ukubonga ukuzinikela nokusebenza kanzima koMongameli uNelson Mandela noThabo Mbeki kanye nabesifazane namadoda amaningi ababamba iqhaza lokugwedla lo mkhumbi kahulumeni ngaphansi kombuso wentando yeningi: EZikhulwini Eziphezulu nokuphatha, izishayamthetho ezingxenyeni zozintathu zikahulumeni kanye namaJaji; ukuqhutshwa yisifiso sokwenza ngcono iqophelo lempilo yabo bonke abantu baseNingizimu Afrika. Ngaphezu kwakho konke, ngimi phambi kwenu ngokuziqhenya nesibindi sokuthi le-Ningizimu Afrika esiyigubhayo namhlanje imihlaba ehlukene nokuhlukaniswa, ingxabano kanye nokukhishelwa ngaphandle kweminyaka eyi-15 eyedlule kuwumphumela wemisebenzi kanye nokuzikhandla kwabantu besifazane namadoda aseNingizimu Afrika azo zonke izigaba zempilo.
Laba bantu baseNingizimu Afrika bamelele ithemba kanye nokubekezela okuyisibonelo sesizwe sethu. Ngaphakathi kwabo kukhona abantu baseNingizimu Afrika abancomekayo kakhulu okungaMalungu ePhalamende lethu lombuso wentando yeningi esaba neshwa ngoHlolanja wangonyaka odlule lokuthi sibavalelise okokugcina. Laba babandakanya u-Brian Bunting, Billy Nair, Ncumisa Kondlo, John Gomomo, Joe Nhlanhla, Cas Saloojee, John Schippers no-Jan van Eck.
Bengingathanda futhi ukufaka uNkk Helen Suzman, umuntu waseNingizimu Afrika ngempela ohlukile, owayemelele amagugu ePhalamende lethu Elisha ezindlini zePhalamende elidala. Yilaba kanye nabanye abantu bezwe lethu okufanele bathole ingxenye enkulu kunazo zonke yomvuzo uma simemezela ukuthi, nanoma yiziphi izivunguvungu zomnotho esibhekana nazo, nanoma yikuphi ukungaqiniseki ngezomnotho okungasihlasela, sisonke oguqukweni isizwe sethu sisesimeni esihle.
Kodwa-ke, akufanele ukuthi sizibhekele phansi izinselele esibhekene nazo. Ukwehla kwamandla omnotho emhlabeni jikelele kubeka umnotho wethu engozini enkulu ngokulahleka kwemisebenzi kanye nezinga lempilo yabantu bethu.
Ngokujwayelekile, ukungaqiniseki ngoguquko lwezepolitiki kungenza imibuzo eminingi kunokuba sinezimpendulo njengamanje.
Ngenxa yalokhu, abanye bethu bajatshuliswa amava esikhashana esimo esimanzonzo baphakamise amahlombe kulokhu kuphithana kwezomnotho kanye nokudideka kwezepolitiki.
Kodwa okwethu uhambo olunethemba nokubekezela. Singasho nje nokusho ukuthi, ngenhlanhla engajwayelekile, izinto eziningi eziphathelene nomyalelo womthethosisekelo wethu ziye zavivinywa kulesi sikhathi esisandakudlula; kanti zonke ziye zasiphasa isivivinyo ukukhombisa umbuso wentando yeningi oguquguquka ngendlela emangalisayo. Umbuso wethu wentando yeningi uphilile. Kancane kancane uyakhula uba namandla, oboshezelwe Umthethosisekelo ocishe kungabi bikho ofana nawo emhlabeni. Nempela, ukuqina kokuzibandakanya kwezepolitiki yethu kulo mqhudelwano wesikhathi sokhetho esizovumelana nakho ukuthi kufanele ube nesithunzi ube noxolo kuyisiqinisekiso sokuphila okuqhubekayo nokujulile kombuso wethu wentando yeningi.
Abantu baseNingizimu Afrika abaqinisekise inqubekela phambili yawo; kanti futhi yibo abazovikela umbuso wethu wentando yeningi eminyakeni ezayo.
Ngivumele, Somlomo nawe Sihlalo, kulesi simo ukuthi ngikhuthaze bonke abantu baseNingizimu Afrika abafanele ukuthi babhalise futhi bavote okhethweni lukazwelonke nolwezifundazwe, ukuze sikwazi ukuzakhela isimo sethu salapho esifuna ukufinyelela khona. Kufanele sikwenze lokhu ngazo zonke izinsuku zokusebenza emahhovisi kamasipala, ngaphambi kokuba kuvalwe uhlu lwamagama abavoti. Kufanele futhi siyisebenzise impelasonto yokubhalisa eyisipesheli ehlelwe yiKhomishana yoKhetho kusasa nangeSonto, mhla ka-7 namhla ka-8 uNhlolanja.
Kufanele ngithathe leli thuba ngikuveze ukuthi ezinsukwini ezimbalwa ezilandelayo ngizoqedqa ukubonisana neKhomishini Yokhetho kanye noNdunankulu Bezifundazwe bese ngimemezela nosuku lokhetho. Malungu Ahloniphekile;
Sikweleta ubuthina njengombuso wentando yeningi kubantu baseNingizimu Afrika, ngomhla ka-27 KuMbasa 1994, okokuqala ngqa ngokuhlanganyela bathathela ikusasa labo ezandleni zabo.
Ngaleso senzo esilula kanjalo kodwa esiphelele sokuvotela uhulumeni wawo wonke umuntu wasezweni lethu ngebhalothi, sasifulathela isikhathi esedlule esasibukela phansi isithunzi sethu sobuntu. Ngakho-ke kufanelekile ukuthi kulesi sehlakalo sigubhe isikhumbuzo sama-20th sokwamukelwa kweKomiti loMthetho we-OAU wekomiti lesikhashana e-Afrika eseNingizimu eMbuzweni weNingizimu Afrika eyamukelwa ngoNcwaba, 1989 owaziwa ngokujwayelekile nge-Harare Declaration.
Lowo mzamo wendlala isisekelo sesivumelwano samazwe omhlaba jikelele, ngokusebenzisa Izizwe Ezihlangene, endleleni yezingxoxo zaseNingizimu Afrika.
Ngaphakathi eNingizimu Afrika, yaba isisusa kokwakwenziwa eNgqungqutheleni ka-1989 yeKusasa Lombuso Wentando Yeningi ihlanganisa ndawonye abantu bezwe abavela kuzo zonke izigaba zempilo. Konke lokhu kwaholela ohlelweni lwezingxoxo ezabonakala okhethweni lwethu lokuqala lokubusa ngokwentando yeningi ngo-1994.
Maqondana nalokhu, kufanele simbonge uMongameli we-African National Congress, Oliver Reginald Tambo, ngokusungula nokuhlola ukuthi kuzosebenza yini ngokusebenzisa abantu bezwekazi kanye nemigwamanda yomhlaba okwaba umhlahlandlela wesixazululo soxolo lwengxabano ezweni lethu. Leso sinyathelo esasinesibindi sokwenza uhlaka olwaluzofuna ukuthula kanye nokubuyisana, esikhundleni sempi nengxabano, sahlehlisa ngobuhle ukusa okwakungesilo iqiniso kweminyaka eyikhulu eyadlula: siphetho sango-1909 seNgqungquthela Kazwelonke eyayiwuphawu lokwakheka kweNyunyana yaseNingizimu Afrika.
Ngesikhathi leyo Ngqungquthela ichaza isithunzi sendawo yaseNingizimu Afrika njengoba siyazi namhlanje, sasincike ekucindezelweni ngokobuhlanga nokukhiphela ngaphandle.
Ngakho-ke, eminyakeni eyi-15 sisembusweni wentando yeningi, singakusho ukuthi ukwesaba, ukungavikeleki kanye nenzondo yeminyaka eyi-100 eyadlula kwenza uxolo oluhlukanisayo noluyize kubaphathi bamazwe ayephethe, kwakungenasisekelo nje kuphela kodwa kwakusendaweni engalungile ngempela.
Lokho kwesaba nokungavikeleki kwaholela emashumini eminyaka yokuzabalaza. Kulokhu, sikhulekela indodana enesibindi yabantu bethu, uSolomoni Kalushi Mahlangu owayolengiswa entanjeni eminyakeni engama-30 edlule eziqhenya, ngokwazi okunokuziqhenya kokuthi igazi lakhe lizononophalisa isihlahla senkululeko.
Ngivumeleni ngibonge uLucas Mahlangu, umfowabo kaKalushi, omele umndeni wakwaMahlangu. USolomoni Mahlangu wayeqhuba isiko lamabutho eminyaka eyadlula phakathi kwawo okwakukhona khona iNkosi uCetshwayo owanqoba amaNgisi empini yaseSandlwana, evikela inkululeko yabantu abawumnsinsi wokuzimilela ezweni lethu kanye nokuphathwa kwemihlaba yabo.
Emva kweminyaka eyikhulu namashumi amathathu (130), singahamba kuphela ngethemba kanye nokubambelela okwakungene kulezo zinhliziyo ezazinkulu.
Ezikhungweni zokufunda, ukuzabalaza okufanayo kwabhebhezela ukuvuka kabusha kokuzabalaza kwezihlwele ngesikhathi sobusika obubandayo emva kokuvalwa kwezinhlangano ezazilwela inkululeko imilomo kanye nokuboshwa kwabaholi bayo abaningi kakhulu abaphezulu
Iqembu lezitshudeni ezazingesabi lutho zaphuma ku-NUSAS zasungula i-South African Students Organisation (SASO) eminyakeni engama-40 edlule.
Kulesi sizukulwane kukhona abaholi bakudala be-SASO, ababandakanya laba: uStrini Moodley, Profesar Barney Pityana, Steve Biko, Onkgopotse Tiro, Harry Nengwekhulu, Themba Sono, Mapetla Mohapi, Mosioua Lekota, Johnny Issel noMthuli kaShezi. Ngethemba elalinikeza ugqozi esikhathini sokuphelelwa yithemba, sibethulela isigqoko. Kulokhu, sifisa ukubonga umzala a-Onkgopotse Tiro, uPat Tlhagwana.
Kulokhu besithanda futhi ukubonga u-Ephraim Mogale ongasekho emhlabeni, uMongameli ongumsunguli we-Congress of South African Students (COSAS) eminyakeni engama-30 eyadlula, kanye nontanga bakhe.
Ekukhumbuleni laba bafundi beminyaka edlule kunemiyalezo ehleli, leyo yokomela inkululeko nolwazi olutheleka nangamandla entsheni yethu.
Umyalezo wezenzo zabo zobuqhawe unkenteza ngokuyiqiniso namhlanje njengoba kwenzeka eminyakeni eminingi eyadlula, owukuthi kufanele sandise sindawonye amathuba; ukuthi impela njengoba kusho Umqulu Wenkululeko, siyivule kakhulu iminyango yokufunda neyamasiko!
Sikhumbuza lezi zinhlangano kanye nabaholi ukugcizelela umoya wethemba nokubambelela okufaka umzabalazo wokubusa kwentando yeningi ngisho ngabe yonke into yayibukeka ilahlisa ithemba; ukugqamisa umsebenzi osemahlombe ethu ukuqhuba leyo migomo abantu abaningi abazinikelele yona, bengavumi ukusatshiswa izinto ezikubuyisela emuva kanye nobunzima.
Kanti futhi, Mama Somlomo kanye nawe Sihlalo Ohloniphekile, kufanele sizibuze ngokwethu: izenzo zethu ziyichaze kanjani indlela yokwakheka kweNingizimu Afrika eminyakeni eyishumi nanhlanu kusukela selokhu kwazalwa umbuso wentando yeningi; nokuthi siyiqhube kanjani intuthuko yomuntu kanye nesithunzi somuntu kusukela egunyeni lokubusa ngokwentando yeningi lika-2004! Namhlanje sinohlelo lokubusa ngokwentando yeningi olusebenza kahle, oluncike emigomeni yokwenzela izinto obala nokuvuleleka, ngamaplatifomu amaningana okuhlanganyela komphakathi nezikhungo ezizimele ezigunyazwe Umthethosisekelo ukuthi kwesekwe ukubusa kwentando yeningi. Eminyakeni, kancane kancane izakhiwo zokubusa sizenze zaba ngcono. Sakhe uhlelo olunempilo lobudlelwano phakathi kohulumeni emikhakheni yonke, sase senza ngcono nokuhlanganyela phakathi kwabo.
Impela, uhulumeni angaziqhenya ngokuthi siguqule ukuhlanganyela kwesibalo sezinhlobo zabantu emisebenzini kahulumeni, cishe yonke into ihlambekisela isimo somphakathi wethu.
Kodwa-ke, nakuba abesifazane bengama-34% azo zonke izikhundla eziphezulu emisebenzini kahulumeni, lokhu kusashoda ekulinganiseni okuhlosiwe esizibekele khona ngokwethu.
Ezingeni lesishayamthetho sikazwelonke nesezifundazwe, izinkomba zithi isizwe sizokwedlula izinga lokumelwa kwabesifazane elingama-32% elifezwe ngo-2004 futhi siyethemba, ngisho u-40% otholakale ngo-2006 okhethweni lohumeni wasekhaya. Siyethemba ukuthi zonke izinhlangano zezepolitiki lapho ziqedela izinhlu zazo zokhetho, zizofaka isandla kulo mzamo omuhle! Nakuba kunenye inqubekela phambili eyenziwe, ku-0,2%, isimo asithokozisi neze maqondana nabantu abakhubazekile abaqashwe uhulumeni, uma beqhathaniswa no-2% ohlosiwe esazibekela wona.
Kukho kokubili, ingxenye ezimele isilele emuva kakhulu.
Kubekwe izindlela ezahlukene zokwenza ngcono ukusebenza kahle kwemisebenzi kahulumeni, kubandakanya nokuphathwa kwezimali, Izikhungo Zezinsizakalo ZaseThusong kanye nezinye izinguquko zokuletha izinsizakalo, izimbizo, njengamanje eMnyangweni Wezindaba Zasekhaya, ubuholi obuqinile.
Kodwa-ke, kuningi kakhulu okusafanele kwenziwe ukwenza ngcono isiko lokwenza umsebenzi kanye nokwazi abanye abasebenzi bakahulumeni, ikakhulukazi labo abaqondene ngqo nokuxhumana nomphakathi ubuso nobuso.
Nakuba Amalungu Ahloniphekile ezokwazi, uhulumeni wethu ulwile nenkohlakalo okungenye yemikhakha ngqangi okugxilwe kuyo.
Lokhu kukhonjisiwe, phakathi kokunye, ekukhishweni kwemithetho, emithethweni nasezimisweni ezibusa abasebenzi bakahulumeni kanye nabasemahhovisi ezepolitiki ngokufana, ukubambisana nomphakathi wesizwe kanye nomphakathi wamabhizinisi, kanjalo nezinamba zezingcingo zokulwa nenkohlakalo.
Kungaba ukuthi izinhlelo zokuvimbela nezokujezisa inkohlakalo azikeneli; kodwa ngokubona kwezinhlelo zikahulumeni, singaziduduza ngokuthi amacala angaphezu kwama-70% enkohlakalo abikiwe kwabezindaba aziwa ngumphakathi ngoba uhulumeni uthole into embi eyenziwe futhi kwaba khona akwenzayo ukulwa nakho.
Izinselele ezifanayo ezibhekene nengxenye ezimele. Ekugcineni, inselele imaqondana nesimiso somthetho; njengoba imaqondana nokuqiniswa okuthembekile.
Nginesiqiniseko sokuthi sonke siyavumelana ukuthi ukuphila kahle komphakathi wethu kuncike, ikakhulukazi, enqubekeleni phambili esiyenzayo ekwandiseni umcebo wesizwe nasekuqinisekiseni ukuthi izinzuzo zokukhula komnotho abantu bashiyelana ngazo bonke.
Kuyisizathu esijwayelekile ukuthi, emva kokudondobala komnotho kwasekuhambeni kweminyaka yama-1980 kanye nasekuqaleni kweminyaka yama-1990, iNingizimu Afrika iye yaba nesikhathi eside kakhulu sokugcina ukukhula komnotho kusukela ekurekhodweni kwalezo zibalo ngonyaka ka-1940. Eshumini Lokuqala Lenkululeko, ukukhula komnotho kwaba ku-avareji engama-3% ngonyaka, kanti lokhu kwaba ngcono kwaya kuma-5% ku-avareji ukusuka ku-2004 ukuya ku-2007. Ngesikhathi sokububula kwabathengi, kuqhutshwa umsebenzi kanye nezimali ezingenayo ezikhulayo kanye nezinga lamandla emali eliphansi kanye namazinga entela, kwabamba iqhaza kulokhu, siyakhuthazwa ukukhankasa ngokubanzi kwamathuba okunye ukwanda okuya phambili.
Lokhu kubandakanya, esimeni sokuqala, amazinga aphakeme okutshalwa kwezimali yizo zozimbili izingxenye ekahulumeni nezimele. Kulokhu, eminyakeni emihlanu edlule, sasilengela kuma-16% esakhiwo semali yomnotho engaguquki isiyonke njengephesenti lomkhiqizo wasekhaya usuwonke i-Gross Domestic Product (GDP). Lokho kube ukwanda ekutshalweni kwezimali okuwukuthi namhlanje le namba isime kuma-22%, eduze kwama-25% ahlelelwe ukutholakala kuphela ngonyaka ka-2014. Lokhu kuyingxenye yomphumela wezinhlelo zamabomu ezenziwe uhulumeni ukwandisa ingqalasizinda yomphakathi.
Kungumphumela futhi wezinqubomgomo zokwenza ngcono isimo sokutshalwa kwezimali engxenyeni ezimele; nokuqhuba inqubomgomo yezomnotho kanye nowemali ngendlela eyandisa ukufinyelela ezinsizakalweni neyehlisa umthwalo wokwehla kwamandla emali kanti khona lapho kuqinisekiswa ukusimama nokuqhubeka kwezomnotho okukhulu.
Ukugxila ezinguqukweni zezomnotho ezincane eshumini leminyaka eledlule, kanye nemizamo ikakhulukazi kusukela ngo-2004 kunendlela enye yokususa izinkinga ezahlukene ekukhuleni okube nomthelela omuhle.
Kungenxa yalesi simo ukuthi kuqale ukusetshenziswa komzamo wokukhula komnotho okusheshayo nokwabelwana ngawo obizwa ngokuthi i-Accelerated and Shared Growth Initiative (AsgiSA), kuqinisekisa ukuthi zonke izivimbo ezibalulekile ezinjengezingqinamba zengqala sizinda, inqubomgomo kanye nezinhlelo zezimboni ezihlangene, inselele yamakhono, izingqinamba zokulawula kanye nokusebeza ngempumelelo kwezinsizakalo zikahulumeni zibhekelwa ngendlela egxilile nelandela uhlelo. Umnotho wethu usuvulelekile, kanti kusukela ngonyaka ka-2004 uye wahlanganiswa nohlelo lwamazwe omhlaba jikelele. Izikhungo zethu zezimali zingamandla esibonelo esihle okusikhusele ezivunguvungwini zomnotho wamazwe omhlaba jikelele.
Yebo, izinga lokufinyelela kuzo emphakathini wethu lisalokhu liphansi kakhulu kunokulindelekile. Umnotho wethu usalokhu uthembele kakhulu ezimayini nasekuhanjisweni kwezimpahla zezolimo kwamanye amazwe. Ngaphandle kwengxenye yezinsizakalo, asikakuboni ukwanda okwanele kakhulu ezingxenyeni ezibalulekile, ikakhulukazi ekwenzeni impahla.
Kanjalo nezinga lokukhula kokuhanjiswa kwempahla emazweni angaphandle alibanga phezulu uma liqhathaniswa namanye amazwe. Kungenxa yalobu buthakathaka okuchaza isikweletu esikhulu ku-Current Account ikakhulukazi uma singena ezinhlotsheni eziphezulu zokukhula. Ngenxa yokuthi sinezinga eliphansi lokulondoloza, bekufanele ukuthi sethembele ekuhambeni kwemali yebhizinisi yesikhathi esifushane ukukhokhela izikweletu kanjalo nezinhlelo zokutshala izimali.
Lezi yizinselele okufanele izwe lethu o ngokuqinisileyo libhekane nazo liya phambili.
Okubaluleke kakhulu umbuzo wokuthi: ukukhula kwezomnotho kahle hle kufanele kukhulume ngani? Umcebo wenziwelwa ukuthi wenze ngcono izinga lempilo yabantu. Ngakho-ke, umbuzo wokuthi ingabe ukukhula kwabelwana ngakho ngokulingana yini kufanele kube isisekelo esiphakathi nendawo sakho konke okucatshangwa ngezomnotho.
Okubalulekile, ukwabelana ngezinzuzo zokukhula kufanele zibe nokutholakala komsebenzi, ukuqinisekisa ukuthi kunomsebenzi ohloniphekile. Ngempela, irekhodi esingaziqhenya ngalo ukuthi phakathi kuka-1995 no-2003, umnotho wenza imisebenzi emisha eyisigidi nesigamu isiyonke; nokubonakala kakhulu imisebenzi engama-500 000 ngonyaka phakathi kuka-2004 no-2007.
Kulesi sikhathi sakamuva, okokuqala ngqa selokhu kwatholakala umbuso wentando yeningi, kwenziwa imisebenzi eminingi kunabantu abasha abangena emakethe yezemisebenzi, bese kunciphisa izinga lokungasebenzi lisuka kuma-31% ngonyaka ka-2003 ukuya kuma-23% ngonyaka ka-2007. Akufanele lokhu kusiphazamise esibopheni sethu sokuqhubeka nokubhekisisa udaba leqophelo lale misebenzi, kubandakanya amalungelo kanye nezinzuzo ezitholwa ngabasebenzi. Ukwabelana ngezinzuzo zokukhula kufanele nakho kubadakanye ukuqalisa kokusetshenziswa okusheshisiwe kwesinyathelo sokukhuphula esikhundleni ababencishwe amathuba kubandakanya nokunikezwa amandla omnotho kwabantu abamnyama ngokubanzi.
Lokhu akusikho ukulandela uhlelo olunobuhlanga. Empeleni, izwe elingaqinisekisi ukubandakanyeka kwabantu bezwe lalo bonke kuwo wonke amazinga emsebenzini wezomnotho ngokuqinisekileyo lizosebenza ngaphansi kakhulu kunalokho ebelingakwazi ukukwenza.
Ukuthi ingxenye ezimele isalele emuva ngokushintsha izinhlobo zokuphatha nemisebenzi yamakhono, ekuthuthukiseni ezomnotho nokunye kwenza ukuthi izwe lihudule izinyawo kumathuba okukhula kakhulu.
Ukushiyelana ngezinzuzo zokukhula nakho kusho iqhaza elisebenza ngempumelelo kanye nelilinganayo kuhulumeni ekusebenziseni imali njengento yokuhambisa futhi kanye nokushiyelana umthwalo wokuhlinzeka izimpahla zikahulumeni.
Amalungu Ahloniphekile azolukhumbula ulwazi oluningi kakhulu oluqoqiwe ngezindaba eziphathelene namaholo omphakathi. Kodwa-ke ngizobala izigameko ezimbalwa futhi ukudweba nje isimo senqubekela phambili esesiyenzile kanye nezinselele esibhekene nazo.
Nakuba kubuhlungu kodwa uhulumeni uyazi ukuthi kusenendlala enkulu emphakathini, kanti nezinga lokungalingani liphezulu kakhulu.
Senze konke okusemandleni eminyakeni eyi-15 eyedlule ukulwa nalesi siqalekiso ngamaholo omphakathi. Ukucaphuna umsebenzi owenziwa ithimba lezifundiswa eNyuvesi yaseStellenbosch, liholwa uSolwazi Servaas van der Berg:
Okokuqala, indlala yemethrikhi yemali yehle kakhulu kusukela ekuqaleni kwekhulu nyaka. Ukwehla kakhulu kwabangwa ukwanda ngokushesha kokusetshenziswa kwezimali zokuxhasa umphakathi kusukela ngo-2002 ukuya phezulu. Lokhu kwenziwa ngcono kukhonjiswa ngokufinyelela ezinsizakalweni eziyisisekelo ukwehla ngokushesha empahleni yendlala ngisho ngabe yandulela ngisho ukwehla endlaleni yemethrikhi yemali. Okwesibili, nakuba ukwehla ebumpofini bekukukhulu, ukungalingani okusezingeni kwakhula ngeminyaka yo-1990.Okwesithathu, izinguquko eziyisisekelo ebumpofini kanye nemikhuba yokungalingani kusho isimo senqubomgomo ngokubanzi [U] ubumpofu sebehlile kusukela ngesikhathi soguquko, kodwa ukungalingani akukaze kube ngcono. (Poverty since the transition: What we know, p8: van der Berg et al, August 2007)
Emininingwaneni yodaba olubalulekile, abacwaningi baqhubeka babheka:
phakathi kwemizi ebandakanya izingane (ezichazwa njengalezi ezineminyaka yobudala eyi-17 nangaphansi), inamba yemizi eyabika ukuthi ingane ihambe ilambile yehla kakhulu (ngaphezu nje kwamaphesenti angama-31) phakatrhi kuka-2002 kanye no-2006. Lokhu kuphakamisa ukuthi isimo sendlala sesingcono kakhulu, ikakhulukazi kubantu abasezingeni elikhulu kakhulu lokuncishwa ngokwenhlala kahle. Ukuba khona kwendlala phakathi kwezingane kwehle ngesigamu eminyakeni emine.
Impela, lokhu kuqapha kuqinisekiswe yithi ngocwaningo lwethu, okukhombisa ukuthi indlala yemali ikakhulukazi emiphakathini yabantu abaMnyama namaKhaladi yehlile, kancane ngenxa yamazinga aphezulu omsebenzi kanye nokufinyelela ezimalini zokuxhasa umphakathi. Kanti inamba yabazuzi bemali yokuxhaswa kwakuyizigidi ezi-2,5 ngo-1999, ngo-2008 le namba ikhuphukile yaba izigidi eziyi-12,4.
Lokhu kakhulu kubangwa ukwanda kakhulu ekufinyeleleni koSizo Lwemali Yokuxhasa Izingane, okwakhulu kusuka kubazuzimali abayizinkulungwane ezingama-34 ukuya ezigidini eziyi-8,1 ngo-2008.
Njengengxenye yomnikelo emalini yabampofu, amathuba omsebenzi ahlosiwe ayisigidi esiso-1 ngokusebenzisa Uhlelo Lwemisebenzi Yomphakathi Eyandisiwe olwatholakala ngo-2008, unyaka ngaphambi kwesikhathi esasicatshangiwe egunyeni lokhetho lwango-2004. Lokhu kwenze ukuthi kube nokwenzeka okukhulu kokwandisa uhlelo nokwenza ngcono iqophelo lwalo.
Maqondana nokufinyelela komuzi ezinsizakalweni eziyisisekelo, izinamba zizikhulumela ngokwazo. Isibonelo, ukufinyelela emanzini ahambayo sekube ngcono ngama-62% ngo-1996 ukuya kuma-88% ngo-2008, ugesi (58% ukuya kuma-73%).
Ubufakazi beholo lomphakathi liyabonakala futhi ekwenziweni ngcono okukhulu kokufinyelela ezinsizeni zempilo eziyisisekelo. Ama-95% abantu baseNingizimu Afrika manje sebehlala endaweni engamakhilomitha ama-5 ensiza yezempilo, kanti sitshelwe ukuthi yonke imitholampilo manje seyiyakwazi ukufinyelela emanzini aphathekayo. Ukukhavwa kokugonywa kwezingane kuyakhula kancane kancane ukufika kuma-85%; kanti nezindaba zikamalaleveva sezehle kakhulu.
Kuyasikhuthaza kakhulu futhi ukuthi ucwaningo lokuba khona kwegciwane lesandulela ngculazi lukhombisa ukuqina nokwehla okuncane emazingeni okutheleleka.
Okunye, uhlelo lwethu lokwelapha ngezidambisi-gciwane alulukhulu nje kuphela kunazo zonke emhlabeni; kodwa luyanda ngaso sonke isikhathi, iziguli ezingaphezu kuka-690 000 eseziqalise ukwelashwa ngezidambisi-gciwane selokhu kuqale uhlelo. Kodwa izindawo zezinsiza eziningi zezempilo azihlali njalo zinemithi edingekayo, amazinga abasebenzi afanele, kanye nokunikezelwa kwezinsizakalo eziyisisekelo njengamanzi ahlanzekile ompompi nogesi. Kwezinye zalezi zinsiza, akuphethwe kahle kanti nendlela abasebenzi abacabanga ngayo idinga ukuthi yenziwe ngcono.
Kwezemfundo, sibone ukwehla enanini lezingane uthisha akanazo ekilasini; cishe ukufinyelela jikelela ngokokubhalisa ezingeni lezikole ezisemazingeni aphansi; nokwenziwa ngcono kwenamba yezingane eziphasa imethamethiki, ukubala nje izibonelo ezimbalwa. Khona lapho umzamo omkhulu ubekwe kakhulu ekwenzeni ngcono ingqalasizinda ezindaweni ezihluphekile. Siyazi ukuthi izinga lokuphuma phakathi ikakhulukazi esokhondari nasemazingeni ezemfundo ephakeme kuphezulu ngokungemukelekile, futhi uhlelo lwezemfundo kufanele lukhiqize izinhlobo zamakhono ezidingekayo emphakathini.
Ukwengeza, imikhuba ekusebenzeni, kukho kokubili ukufundisa nokufunda, kukhombisa ukuqhubeka okukhathazayo kokuhlukanisa umphakathi kwesikhathi esedlule.
Okungakholakali, lapho imfundo idingeka khona kakhulu ukuze isize ekuqedeni indlala, yila ingqalasizinda ingekho khona, amandla okuphatha kanye nawothisha awathokozisi. Izinhlelo zomphakathi ezenziwa nguhulumeni seziyenze ngcono futhi impahla yemiphakathi ehluphekile, ngokwezindlu izindlu ezihlinzekiwe ezixhaswe ngezigidi ezi-2,6. Kufanele sivume futhi ukuthi uhlelo lokubuyiselwa kwemihlaba kanjalo nosizo ngemuva kokubuyiselwa belungaphathwa ngokushesha nakangcono. Kukonke, siyaziqhenya ngenqubekela phambili ezinhlelweni zomphakathi wethu. Kodwa singeze sazenelisa ngoguquko olubalekayo nje kuphela. Kungaba ezemfundo, ezempilo, ezezindlu, amanzi noma ukuhlanzeka, umbuzo omkhulu osimele zonke izinsuku ukuthi silenza njani iqophelo lalezi zinsizakalo zethu libe ngcono! Sisenebanga okufanele silihambe kulokhu. Malungu Ahloniphekile;
Uhlupho lobugebengu lusewumthombo omkhulu wokungavikeleki kwabantu baseNingizimu Afrika. Ulwazi lwansuku zonke, omakhelwane abampofu nabacebile ngokufana, ngokunye ukukhathazeka ekuhlambekiseleni ekuhlaselweni kodlame okungahle kwenzeke. Ezikhungweni zikahulumeni nezizimele, ukwenzeka ukuthi izikimu zokukhohlakala zincunce izidingongqangi ngenkohlakalo njalo kuba yinto ebanga ukukhathazeka okukhulu. Izinga lobugebengu lilonke, selikhulile ngo-2002, liye laqhubeka nokwehla. Zonke izinhlobo zezibalo zingashiwo zikhombisa lokhu. Kodwa siyazi ukuthi ukwehla bekungasheshi ngokwanele, hhayi ngisho izinga eliphakathi kuka-7-10% esizibekele lona ngokwethu ezigabeni eziningi ezahlukene zobugebengu bokuthintana. Ukuthi izigameko zokurobha ngodlame emizini kanye nasemabhizinisini bekwanda; nobugebengu obubhekiswe kwabesifazane nezingane abukakehli ngendlela ebonakalayo, kuyinto ekhathazayo.
Lokhu kukhomba ubuthakathaka ezindaweni zethu, ikakhulukazi ukwakha amabhondi emiphakathi ebumbene ezosiza ukuvimbela nokuqeda ubugebengu. Ikhomba ubuthakathaka kohlelo ohlelweni lwezobulungiswa oluqondene nobugebengu, kusukela ekuphenyweni kobugebengu kuye ekubuyiselweni kwezimilo zabanamacala. Kukhomba ubuthakathaka ekusebenzeni kahle kohlelo lwezinkantolo, ngakho kokubili okobuchwepheshe kanye nenye ingqalasizinda nokuphatha. Lezi yizinto ukuguqulwa okuphelele uhlelo lwezobulungiswa bobugebengu oseluqale ukuzibheka.
Kodwa-ke, ekuzigxekeni ngokungenazwelo, akufanele silahlekelwe ukuthi lokhu esikuhlolayo uhlelo olunegunya kangcono kunokuke kwaba khona ezweni lethu.
Lokhu kubangelwa uguquko oselwenzekile kulezi zikhungo, ngokwezinkolelo zazo ezincike esikweni lamalungelo abantu, izinhlobo zezibalo zabantu abakhona kanye nezinhlelo zabo zokuziphendulela.
Kodwa-ke masingazikhohlisi: njengayo yonke impilo yethu, lolo guquko lusesemazingeni asafufusa. Kusenebanga elide okufanele silihambe.
Nginesiqiniseko sokuthi Amalungu Ahloniphekile azovuma ukuthi ubuntu balesi sikhathi sombuso wethu wentando yeningi kufanele sithole ukusho ngezinga esizokwazi ukulalela ngalo umphakathi osengozini kakhulu.
Kulokhu, , ngokusebenzisa umthetho, izingqungquthela zamazwe omhlaba kanye nezimiso kanye nemikhankaso siqinisekisa ukuthi imizamo ephathekayo iyenziwa ukwenza ngcono izimo zezingane, abesifazane, abantu abakhubazekile nasebekhulile. Ngokusebenzisa imikhankaso yokwazisa nangenxa yobudlelwano esibakhile nezinhlangano ezimelele la maqembu abekeke engozini, senze ngcono ukuqwashisa ngezindaba ezibathintayo; futhi saqhubeka nokukhuthaza ukujwayeleka kwalokhu kukhathazeka. Kuyirekhodi okufanele siziqhenye ngalo ukuthi, imizi ephethwe ngabesifazane ithole isheya elingaphezu kwe-avareji yeholo lomphakathi kubandakanya izindlu nokunakekelwa kwezempilo; nokuthi phakathi kwezinhlelo eziyimpumelelo kakhulu bekunemikhankaso ngokugonywa kwezingane kanye nokudla ngendlela efanele
Kanti ukufinyelela emsebenzini kunzima kakhuklu kwabesifazane basemakhaya, intsha kanye nabantu abakhubazekile. Igciwane lesondulela ngculazi linomthelela kakhulu kwabesifazane abasebancane. Udlame olubhekiswe kwabesifazane nezingane luphezulu kakhulu.
Konke lokhu kuyimisebenzi yesikhathi esizayo.
Mama Somlomo noSihlalo Ohloniphekile;
Lokhu ngokunye kwezinto ezinhle ezalethwa umbuso wentando yeningi; kanye nenqubekela phambili uhulumeni akayenzile ekufezeni igunya labavoti.
Kungeze kwaphikiswa ukuthi, ngananoma iyiphi indlela, inqubekela phambili eyenziwe kusukela ngo-1994 beyijabulisa. Kodwa angeke futhi kube nokungabaza ukuthi izinselele zizohlala zijulile.
Kufanele ukuthi sizikhumbuze ngokwethu ngalokho kuhlola kwethemba nokuqina okufundisayo, ukuqhubeka noshintsho, kwasho uMongameli wangaphambili uNelson Mandela, emlandweni wakhe, ku-Long Walk to Freedom:
" Ngiluhambile lolo hambo olude oluphikelele enkululekweni. Ngizamile ukuthi ngingaphambuki; ngiwenzile amaphutha endleleni. Kodwa ngithole imfihlo yokuthi emva kokugibela intaba enkulu, umuntu uthola ukuthi ziningi izintaba okusafanele azigibele. Ngike ngathatha umzuzu ngathi ukuphumula, ngantshontsha ukubukeka kwezwe elingizungezile okuyisimangaliso, ngabheka emuva ebangeni esengilihambile. Kodwa ngingaphumula nje okwesikhashana, ngoba inkululeko ihamba nezibopho zokwenza umsebenzi, kanti angeke ngikwazi ukulova nje, ngoba uhambo lwami olude alukapheli namanje ."
Ezinyangeni ezimbalwa ukusuka manje abantu basezweni lethu bazobe bememezela ubuholi abangathanda ukuthi buthwale lo msebenzi ohlonipheke kangaka walo mlweli nkululeko omkhulu kanye nabanye abasunguli bombuso wentando yeningi .
Nakuba izindlela zethu zokwenza zingehluka, izinjongo okudingeka ukuthi sizihlose zishiwo ngokucacile nokungambandazi kuMthethosisekelo wethu: ukwakha umphakathi obumbene, ongenabuhlanga, ongenabulili, obusa ngentando yeningi noqhubekayo obamba iqhaza elihle ekwakheni umhlaba ongcono.
Eminyakeni eyisithupha eyedlule, abaholi babantu bethu bahlangana ndawonye eMbizweni Yokukhula Nentuthuko bafinyelela esivumelwaneni sokuthi ngemisebenzi okufanele siyenze ukwenza ngcono izinga lempilo yabantu baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi ukugamula ukungasebenzi nobumpofu ngo-2014. Lokhu kubandakanya:
* ukwakha imisebenzi eminingi, imisebenzi engcono kanye nemisebenzi ehloniphekile yabo bonke ngokusebenzisa amazinga aphezulu okutshala izimali, izinhlelo zemisebenzi yomphakathi, ubambiswano lwezingxenye kanye namasu, ukuthola impahla endaweni, ukukhuthaza amabhizinisi amancane kanye nokweseka izinkampani;
* ukubhekana nenselele yokutshala izimali ngokwenza ngcono ukulondoloza, ukuhambisa ngemfanelo izidingongqangi zisuka ezimalini zempesheni nakwezokusiza abasebenzi, ezezindlu, iminikelo yezinhlangano zezimali kanye nokunikezwa amandla ezomnotho kwabantu abamnyama ;
* ukuqhuba ukulingana, ukuthuthukisa amakhono, ukwenza amathuba ezomnotho kanye nokwelula izinsizakalo ; kanye
* nesenzo sasendaweni kanye nokuqalisa ukusebenza kwentuthuko, kubandakanya ukuhlinzeka ngengqalasizinda nokufinyelela ezinsizakalweni eziyisisekelo.
Nginesiqiniseko sokuthi, njengengxenye nokwengeza kulezi zinhloso abantu baseNingizimu Afrika angeke behluke maqondana nesidingo sokwenza ngcono uhlelo lwethu lwezemfundo; ukunikezela ngokunakekela kwezempilo okusebenza kahle, okunesithunzi nokulinganayo; ukuthuthukisa izindawo zethu zasemakhaya kanye nokuqinisekisa ukuvikeleka kokudla; nokuqinisa ukulwa nobugebengu kanye nenkohlakalo.
Ngisho lezi zinto hhayi ngoba zihlanganisa konke noma ukuthi ngokuzibalula sizolungisa bonke ububi bomphakathi wethu. Kunalokho, ngikhethe ukwenza kanjalo ukuze ngigcizelele iphuzu lokuthi iNingizimu Afrika ayiphathwa indlala yemigomo. Inselele yethu ukuthi le migomo siyihumushe ibe yizinhlelo namaphrojekthi ukuze kuqaliswe ngempumelelo ukusebenza.
Le migomo ingeyabantu bonke, njengoba ikhonjsiwe ku-United Nations Millennium Development Goals.
Kanti-ke abantu namhlanje bangabhekana nengozi yokuthi ukufezeka kwalezi zinhloso kungahlehliswa ngeminyaka eminingi, uma kungeyiwo amashumi eminyaka, ngenxa yenhlekelele yezomnotho ekhungethe umhlaba jikelele. Okwaqala njengenhlekelele kwezezimali, uma ukubhekile, ezikhungweni zokwebolekisa ezimbalwa sekuqubuke kwaba isimo esibaluleke kakhulu sesikweletu emhlabeni jikelele, nemiphumela enamandla yokukhiqiza ngempela kanye nokuhweba.
Singawugxeka umhawu, umqondo omfishane kanye nokunganaki kwabaphathi bezinkampani ezinkulu ezadlondlobalisa inhlekelele. Singagxeka izinqubomgomo zohulumeni ezasusa amehlo ebholeni kwavunyelwa ilayisense enomhawu yezimakethe ezingalawulwa ukuthi zibange inhlekelele ezinhlelweni zezimali. Singakwenza konke lokhu, futhi sizothetheleleka ngokuphelele. Umsebenzi wakho omkhulu nosheshayo ukuncoma ngokugcwele imiphumela yale ntuthuko emnothweni wethu nasesifundeni sethu, nokwenza izimpendulo ezizonciphisa umthelela wazo ikakhulukazi izingxenye ezisengozini kakhuku emphakathini wethu. Esikwaziyo ukuthi isimo esilawulayo ezweni lethu kanye nezinqubomgomo zesabiwo mali eziwumjikelezo eziphikisayo. Samukele lokhu ukuze sisizakale ekuvimbeleni izinhlekelele.
Kodwa-ke sonke siyazi, ngoba sonke isifake ngokuhlanganiswa emnothweni, izimfuno zokukhiphela ngaphandle impahla; ukufinyelela ezimalini kanye nokungena kwemali okuphenduke kwaba kubi; ukufuneka okuphansi kunciphise umkhiqizo, ukwakheka kwemisebenzi kuthinteke kabi kanti kwezinye izingxenye ukudilizwa yinto eyiqiniso. Lobu bunzima buhlangane nesikhathi lapho ukwehla kwamandla emali kanye namazinga enzalo kusesephezulu kakhulu.
Kuhlanganisiwe, lezi zinto zikhombisa ububi bezimali nesidinga ukuthi sandise ukuhlinzekwa kwezinsizakalo futhi siqalise ukusebenza kwamaphrojekthi engqalasizinda. Ngokunjalo, siye saphoqeleka ukuthi sinciphise ebesikucabangile ngokwezokukhula kanye nokwenza amathuba omsebenzi.
Siyazi ukuthi iNingizimu Afrika ayithintekile ngokunamadla kunamanye amazwe. Ngempela, ngesikhathi lapho abanye benokwehla kwamandla ezomnotho, iNingizimu Afrika kanye namanye amazwe kuzwekazi kusabheke ukukhula, ngisho ngabe ngezinga eliphansi. Maqondana nalokhu, Malungu Ahloniphekile, ngiyajbula ukubika ukuxhumana phakathi koMnyango KaMongameli nabaholi babalingani bemiphakathi abehlukene, sivumile ngokuhlanganyela ukwenza izindlela zokungenelela ezizonciphisa umthelela wale nhlekelele emphakathini wethu. Ithimba elibhekene nalezi zindaba lisasebenza kanzima; kanti nezigaba ezilandelayo ngokubanzi zezimpendulo kusaxoxwa ngazo:
Okokuqala, uhulumeni uzoqhubeka namaphrojekthi akhe okutshala izimali emphakathini, inani lawo eselikhuphuke lafika kumabhiliyoni angama-R690 eminyakeni emithathu ezayo. Maqondana nalokhu, lapho kunesidingo khona, sizothola izindlela ezinokusungula zokuqoqa izimali . Lokhu kuzobandakanya usizo oluvela ezikhungweni zethu zokuthuthukisa izimali kanye nokuboleka izimali ezinhlanganweni zamazwe omhlaba, kanjalo nokubambisana nezinhlangano ezizimele nokusebenzisa izidingongqangi ezilawulwa abasebenzi ezinjengezikhwama zezimpesheni.
Okwesibili, sizoqinisa izinhlelo zokuqasha kuhulumeni. Ngakolunye uhlangothi, izinhlelo zokwandisa izingxenye zomsebenzi ezifana nezempilo, inhlalakahle yomphakathi, ezemfundo kanye nezinhlangano zokuqinisa umthetho zizoqhubeka. Ngakolunye uhlangothi, sizosheshisa ukwethulwa kwesigaba esilandelayo soHlelo Lwemisebenzi Yomphakathi Olwandisiwe.
Okwesithathu, kungenziwa izenzo ezithethelekayo engxenyeni ezimelele ukuphikisana nokwehla kokutshalwa kwezimali okweqile kanye nokuvalwa kwemigudu yokukhiqiza okungadingekile noma izitshalo.
Engxenyeni yakhe, uhulumeni uzojwayela ukuxhasa ngezimali kwezimboni kanye nezinto zokukhuthaza ukusiza ukubhekana nezinselele ezingxenyeni ezahlukene, kanye futhi nokukhuthaza ukwakhiwa kwezikhungo zezimali ukusiza amafemu asebunzimeni ngenxa yenhlekelele. Ezinye izindlela ezahlukile ekuhambiseni abasebenzi ziyobhekwa, kubandakanya amaholide amadenyana, ukuqeqeshwa okweluliwe, isikhathi esifushane kanye nokushiyelana ngomsebenzi. Lokhu kuzohlanganiswa nokukhuthazwa komkhankaso wokuZidla ngokuba ngowaseNingizimu Afrika kanye nesinyathelo esiqinile ekungeneni kwempahla evela kwamanye amazwe okungekho emthethweni.
Okwesine, uhulumeni uzoqhubeka futhi andise nezindleko zomphakathi, kubandakanya ngokuqhubekayo ukwandisa ukufinyelela emalini yokuxhasa izingane ukufika ezinganeni ezineminyaka eyi-18 ubudala nokwehlisa iminyaka yokufaneleka ukuthola impesheni ibe ngama-60 eminyaka emadodeni.
Ukwengeza, sizosebenzisa ngokubanzi kakhulu Imali Yokuxhasa Kokukhulula Izingxaki Zomphakathi kanye nezindlela zokuvikela ukudla ikakhulukazi ukuhlosa labo mhlawumbe abangavikelwe yiSikhwama Somshuwalense WokungaSebenzi noma asebeziqedile izinzuzo zabo.
Sizoqhubeka nokuqapha okuyisipesheli enselelweni yokuziphatha ngendlela engeyona yoku ukuncintisana engxenyeni yezinye izinhlangano zethu. Kulokhu, besithanda ukuncoma Ikhomishini Yokuncintisana ngesandla sayo esiqinile abasikhombisayo ukuqinisekisa ukuthi abonile bayajeziswa.
Siyethemba ukuthi umphakathi uzothuthukisa izinga lawo lobushoshovu ukuqinisekisa, phakathi kwezinye iizinto, ukuthi amanani entengo afakwayo ayehla, izinzuzo abantu bayazizwa.
Lezi zindlela ezisheshayo zizokwaziswa umgomo wenqubomgomo wemali owumjikelezo ophikisanayo. Kodwa-ke, sizoqinisekisa ukuthi amazinga okweboleka okwenziwa uhulumeni ahlakaniphile futhi ayaqhubeka. Lokhu futhi kusho ukwehla ngokushesha emazingeni esikweletu sikahulumeni noma nini lapho lapho izimo ziba ngcono. Imizamo yethu futhi izokwaziswa ngukubonga ukuthi izindlela zokuvikela imvelo nokunciphisa umthelela wokushintsha kwesimo sezulu nakho kungaba nesandla ekwakheni imisebenzi.
Kokubili imihlangano ye-G20 kanye nokunye ukuxhumana nezikhungo ezinezinhlangothi eziningi, uhulumeni wethu ukhulume ngokungenelela okufanele nokuphuthumayo ikakhulukazi emazweni asethuthukile lapho izinhlekelele zaqala khona nalapho ezinamandla khona. Sikholwa ukuthi isikhathi sesifikile sokuqinisa imithetho yasekhaya kanye nokusuphavayiza uhlelo lwezimali; kodwa ngaphezu kwalokhu, ukuqapha okuqinaqinile nokuthatha izinyathelo ezingeni lamazwe omhlaba sekuyinto engenakugwemeka nedingekayo.
Okubalulekile, kufanele sivikele isithunzi sohlelo lokuhweba lomhlaba, siqedele izingxoxo zamanje ku-Doha Round zezingxoxo zokuhweba emhlabeni, nokuqinisekisa ukuthi intuthuko ayincishiswa.
Isifundo sesikhathi eside kulolu lwazi ukuthi sidinga ubambiswano olunamandla kwababambe iqhaza kwezomnotho ezingeni lasekhaya nelamazwe omhlaba, hhayi ngokumisa umthelela wenhlekelele nje kuphela, kodwa ukufaka izindlela ezizovimbela ukuthi kuphinde kwenzeke. Ezweni lethu, sizoqala lezi zinto njengengxenye yohlelo lokubeka umphakathi wethu ekukhuleni okuphezulu nasemgudwini wentuthuko. Ubude besikhathi maqondana nokuthola umzila kungenzeka ukuthi kweluliwe kancane. Kodwa asingabazi ukuthi umzuzu ubuzofika ngokushesha ngaphandle kokuchitha isikhathi.
Maqondana nalokhu, kuzoba semqoka kakhulu ukuthi izwe lethu silibeka kanjani emathubeni ahlukile okusizakala esihlangana nawo. Lapha ngibhekise ngqo kwiNdebe yoMhlaba ye-FIFA yowezi-2010 kanye neNdebe yeNhlangano ezoba sezinyangeni ezimbalwa ukusuka manje. Cishe onke amaphrojekthi kanye nezinhlelo sekuphelile noma sekusondela ekupheleni kusukela ezinkundleni zezemidlalo, ingqalasizinda yezokuthutha, izindlela zokuvikela, izindaba zezindawo zokuhlala ukuya ezinhlelweni zezempilo nezokuhambela kwamanye amazwe ukuqinisekisa ukuzethemba kwabemidlalo yebhola lezinyawo bamazwe omhlaba ukuthi eyethu kuzoba ithonamenti eyimpumelelo ngempela. Futhi siyakholwa ukuthi, emva kokuwina okuhlanu kulandelana, ithimba lesizwe lebhola lezinyawo manje seliyazethemba kakhulu lizilungiselela ukudlala ngaphezu kokulindelekile!
Kodwa ngaphezu kwalokho,umnikelo wale midlalo kuzoba ukukwazi ukukhombisa imfudumalo nobuntu beNingizimu Afrika kanye ne-Afrika ukushintsha ngokugcwele imicabango ngezwe lethu kanye nezwekazi lethu kubantu bomhlaba. Lokho kuncike kithi sonke; futhi akukho nani lentengo esingalifaka lapho! Futhi besithanda ukuhalalisela wonke amathimba ezemidlalo aqinisekise ukulandela ukusebenza ngokuncomekayo kweNingizimu Afrika ngonyaka odlule. Ithimba lekhrikhethi lifanelwe imiklomelo ngokwenyuka lifinyelele esicongweni samazinga amazwe omhlaba
SingoNgcweti beBhola lomBhoxo Emhlabeni; u-Giniel de Villiers nethimba lakhe banqoba i-Dakar Rally; abadlali bemidlalo yama-Olimpiki yabaKhubazekileyo bayaqhubeka nokusenza ukuthi siziqhenye ngabo; kanye nethimba lethu lebhola lezinyawo labangaphansi kwama-20 eminyaka benza kahle kakhulu esimeni sokuqhudelana kwangempela.
Somlomo noSihlalo Ohloniphekile; Emasontwweni amabili edlule, iNingizimu Afrika neMali baqede ingxenye yamagugu ukulondoloza amamanyuskripthi asendulo e-Timbuktu. Leli fa elicebile likhombisa i-Afrika njengophawu lwethemba lesayensi nemibhalo, ifilosofi kanye nezomnotho, okwaphazanyiswa ukuhweba ngezigqila kanye nokuhlangahlangana komcebo wase-Afrika. Umzamo kufanele usenze sikwazi ukusebenza namanye amazwe ezwenikazi lethu futhi nangaphandle kwasekhaya siqhubeke sibe sesimeni sabantu abangcono.
Ngaphezu kweminyaka eyi-15 azange singazami ukuqinisekisa ukuthi i-Afrika ithola ukuvuselelwa kulokho okufanele engabe kwenziwa ngempela kube Ikhulu nyaka le-Afrika. Kancane kancane, izwekazi lethu liyaqhubeka liphikelele ekuzalweni kabusha, ngothando lwabantu balo bekhula bedlondlobala ohlelweni lwabaholi balo, lizwakalisa ithemba lalo kanye nokubambelela kwalo esigabeni samazwe omhlaba. Yilokhu, futhi yilokhu kuphela okwenze ukuthi siqhubeke nokusiza abantu base-Zimbabwe ukuthola isixazululo sesikhathi eside kule nhlekelele yaleliya lizwe. Sihalalisela zonke izinhlangano e-Zimbabwe ngokuphetha izingxoxo, ngokuthi balethe umklomelo wokugcina owawuyilokhu uyisifiso sabantu baleliya lizwe kanye nengxenye yezwekazi iyonke: uhulumeni ophilile nosemthethweni owenzelwe ukubhekela izinselele abantu ababhekene nazo. Kusithokozisa kakhulu lokhu, izolo, Iphalamende lase-Zimbabwe liphasise isiChibiyelo 19 soMthethosisekelo, lenza isesekelo sokuqalisa uhulumeni obandakanyayo.
Lapha ngiqagula ngokukhethekile umxhumanisi we-SADC, uMongameli wangaphambilini uThabo Mbeki kanye nethimba elasiza ngokungakhathali nangokubekezela ukuletha uhlelo esiphethweni esiyimpumelelo.
Manje umsebenzi wokwakha kabusha usungaqala ngamandla; kanti abantu baseNingizimu Afrika bahlala njalo bekulungele ukusiza lapho esingasiza khona. Maqondana nalokhu, kunesidingo esiphuthumayo sokusiza ngokubhekana nenhlekelele yabantu kulelo zwe. Sqinisekile ukuthi, ngoba uyanakekela, umphakathi wamazwe omhlaba uzobambisana nabantu baseZimbabwe lapho bebhukula belandela umkhondo omusha.
Sikhuthazekile ngokuthi noma ngabe yikuphi abahlangabezana nakho nabakuqalayo okungakhombisa inqubekela phambili yabantu base-Democratic Republic of Congo ekumasheni kwabo beya ekuqineni nasenqubekeleni phambili, leyo nqubekela phambili angeke iguquke. Ubambiswano olusandukwakhiwa phakathi kobuholi base-DRC nobase-Rwanda bunesethembiso sokuqhubeka ngezindaba zokuvikeleka nasekubhekaneni nenhlekelele eqondene nokunakekeleka kwabantu; kodwa mhlawumbe namaqondana nenkulumo mpendulwano yezombusazwe. Ngendlela efanayo, sizoqhubeka nokusebenza namanye amazwe kanye ne-African Union ukulandelela lezi zinhloso e-Burundi, Sudan, Sahara esentshonalanga, Cote d'Ivoire, Somaliya nakwezinye izindawo.
Njengoba kuke kwafakazeleka ezintuthukweni ezahlukene ezinyangeni ezimbalwa ezedlule, iNingizimu Afrika izosebenzisa ilungelo lokuba ngusihlalo we-SADC ukuqinisa lesi sikhungo sesifunda esibalulekile, kugxilwe ikakhulukazi ekuqaliseni ukusebenza kwezixazululo ze-Summit kanye nokuqinisa ukubumbana kwesu lesifunda. Kanti futhi khona lapho sizokwenza ngcono ukuxhumana kwe-SADC neMakethe Ejwayelekile yaseMpumalanga neyaseNingizimu ne-Afrika kanye noMphakathi waseMpumalanga ne-Afrika. Le mizamo izokwenziwa ukuze kwelulwe kunokuthi kwenziwe buthaka ubudlelwano obubekiwe bajula esinabo ne-Southern African Customs Union (SACU).
Kulo mcimbi sihalalisela abantu nabaholi base-Zambiya, e-Ghana kanye naseMelika ngokhetho oluwuphawu olungale kwemingcele emincane yamazwe ezwe labo.
Sizohlala njalo sifuna ukuqinisa ukubambisana nalaba kanye namanye amazwe ukulandelela lokho okuhle ebantwini.
. Sinenhlanhla yokuthi kulo nyaka siphetha imigubho yeminyaka yeshumi lokuqala yobuhlobo bobunxusa neRiphabhliki Yabantu base-China. Kule minyaka, kwacaca kunangaphambilini ukuthi kunenzuzo enkulu kithi sobabili engazuzwa ngalokhu kubambisana.
Sithanda nokuqinisekisa ukuzibophezela kwethu ebudlelwaneni obukhulu esibenze ne-Brazil kanye ne-Indiya ngokusebenzisa i-IBSA; kanjalo nobudlelwano obuqina ngamandla izwe lethu elibenze neRashiya kanye namazwe ase-Asia, i-Middle East, kanjalo neLathini neMelika eseNyakatho.
Ezikhathini ezingasabaleki siye sazwakalaisa ukukhathazeka kwethu ngokuqhubeka kwengxabano yaseMpumalanga eMaphakathi jikelele ikakhulukazi kwa-Israel nasePhalestina. Akuchazeki ukuphoxeka kwethu ngokubhebhetheka kwakamuva nje kwengxabano nokulahleka kwezimpilo okukhulu, ikakhulukazi abantu abangenacala kubandakanya izingane, abesifazane nabantu asebekhulile.
Angeke kuze kube nencazelo yalokhu kucekela phansi okungenangqondo kanye nale ndlela yokuziphatha enonya nodlame. Siyethemba kulokhu ukuthi le mizamo yomphakathi wamazwe omhlaba evuselelwe kabusha yokuthola isixazululo sesikhathi eside sale ngxabano izothela izithelo, ukuze abantu bakwa-Israyeli namaPhalestina bezokwazi ukuphila ngokuthula nokuvikeleka njengomakhelwane ezindaweni ezizimele. Sihalalisela uhulumeni nabantu base-Cuba kulesi sikhumbuzo sama-50 bathola ukuzimela kanye nenkululeko yokuzikhethela indlela yentuthuko.
Sakwazi onyakeni odlule ukuphothula izingxoxo ne-Nyunyana yaseYurophu ngobambiswano lwethu olunesu, futhi siyethemba ukuthi umoya owenza lokho kubandakanyeka uzovuka lapho siqedela izingxoxo zezinhlangano eziningi ngeZivumelwano Zokubambisana Kwezomnotho namazwe asesifundeni sethu. Silindele ukukuqinisa futhi lokhu kubambisana uma sesisingatha INgqungquthela yeNingizimu Afrika-neNyunyana yaseYurophu ekuhambeni kwalo nyaka.
Kanye namanye amazwe aseNingizimu sizoqhubeka nokulandela imbangela yokuhlela kabusha kweziZwe eziHlangene, isiKhwama seMali samaZwe Omhlaba kanye nezinye izikhungo zezinhlangano eziningi ukuze bakhombe ushintsho kanye neqiniso lomhlaba oshintshayo basebenze ngendlela yentando yeningi, yokulingana neyokwenzela izinto obala.
Siyazibophezela futhi ukuhlangabezana nezinhloso zezivumelwano zamazwe omhlaba, kubandakanya i-Kyoto Protocol kanye nabalandeli ngezinzuzo zesizukulwane esizayo phakathi kwabantu bethu kanye nabantu bomhlaba.
Imizamo yethu emibili yaziswa imigomo emibili eyisisekelo: isidingo sokuqedela igunya elanikezwa lo hulumeni ngowezi-2004; nokubaluleka kokuqinisekisa ukuthi uhulumeni ongenayo emva kokhetho uthola iplatifomu elungile ukuqalisa izinhlelo zakhe ukusebenza ngaphandle kokubambezeleka okungachazeki. Ezinyangeni ezimbalwa ezizayo ngokuncika okhethweni lukazwelonke nolwezifundazwe, sizozama ukuqedela lelo gunya elamukelekile. Njengengxenye yamaphrojekthi amaningi anemininingwane asohlelweni loHlelo Lokusebenza lukahulumeni, sizoqaphela:
* ukwenza amandla okusebenza adingekayo ekwenziweni kwemisebenzi okwenziwe ngcono nasekuhlanganeni okungcono ngaphakathi nakuzo zonke izigaba zikahulumeni, kubandakanya uhlelo lwesu lukazwelonke;
* ukuqhubeka nomkhankaso wokuLwa Nendlala nokuqedela uhlaka lweSu Lokulwa Nendlala Eliphelele ngokubonisana nomphakathi ngokwenziwayo;
* ekuqaleni ukusebenzisa uhlelo oluphelele esilwenzile ukuqeda izigameko zekholera ezingxenyeni ezahlukene zezwe;
* ukuqhubeka nocwaningo kanye nokubonisana ngoHlelo Lokuvikeleka Komphakathi Oluphelele, kubandakanya udaba loMshuwalense Wezempilo Kazwelonke;
* ukuqinisa umkhankaso wokonga amandla kagesi, ukuze sibhekele ubunzima bukagesi nokushintsha indlela yethu yokuziphatha, sibe futhi khona lapho sisheshisa amaphrojekthi okwenza amandla amasha nokusebenzisa imithombo kagesi ehlukile sazi ukuthi ukwengeza emiphumeleni yokushintsha kwesimo sezulu, izidingongqangi ezifana namafutha kawoyela wezinsalela futhi namanzi ayehla ngesikali esifanayo lapho ukufuneka kwawo kukhula;
* ukuhlanganisa emsebenzini wamaQoqo afanele okutholakele ocwaningweni ekungeneleleni kweZomnotho Kwesibili njengohlelo lomsebenzi womphakathi, ukwesekwa kwamabhizinisi amancane kanye nemizamo yokuthuthukisa izindawo zasemakahaya;
* ukuqinisa imizamo yokuvuselela kabusha uhlelo lwezobulungiswa obubhekela ubugebengu, kubandakanya amandla angcono asemthethweni, ukukhula ngokushesha kwenamba yabaseshi, ukusetshenziswa ngokugcwele kolwazi kanye nobuchwepheshe bokuxhumana, kanye nokuphathwa kwezinkantolo; kanye
* nokuxhumanisa izinhlelo okuhloswe ngazo ukuqinisa imishini ebhekana nezindaba zokulingana ngokobulili njengokumelelwa ngo-50/50 ezakhiweni ezenza izinqumo, ukuthuthukiswa kwentsha, amalungelo abantu abakhubazekile kanye namalungelo ezingane kubandakanya ukuqedela ukubonisana ngeNqubomgomo Yentsha Kazwelonke, kulungiselelwa ukuqalisa ukusebenza koMqulu Wentsha Yase-Afrika uma ngabe seyisetshenziwe yiPhalamende, nokumisa Inhlangano Yokuthuthukisa Intsha Kuzwelonke; ukwethula i-SADC Protocol ngoBulili kanye neNtuthuko ePhalamende; ukuqinisa ukukhuthaza ngamalungelo abantu abakhubazekile; nokwelula inamba yomasipala abenze Izindawo Okugxila Kuzo Amalungelo Ezingane ngaphezu kwama-60%. Lezi zinhlelo kanye nezinye, kubandakanya nemiSebenzi emQoka akhonjwe kuNkulumo Echaza iSimo seZwe ngoNhlolanja owedlule, yakha isisekelo semizamo yethu yokuphetha igunya elamukelekile nokwenza isisekelo sekusasa. Sizoyiqinisa imizamo yethu ekhuthazwa ngugqozi, ithemba kanye nokuqina kwabantu baseNingizimu Afrika ngokulandelela lokho okuhle kithi sonke. Lokhu kuwumthombo wokuzethemba kwethu uma sithi isizwe sisesimeni esihle. Umbuso wethu wentando yeningi uphilile. Kancane kancane ukhula ngamandla. Ngamagama kaMongameli Mandela wangaphambilini, [si] ngalibali ngoba uhambo [lwe]thu olude alukapheli. Ngiyabonga.
Last Modified: Tue, 24 Feb 2009 16:00:15 SAST